Diyaargarawga shirka Khaatumo II oo si wayn uga socda degmada Taleex ee gobolka Sool. – Radio Daljir
Diyaargarawga shirka Khaatumo II oo si wayn uga socda degmada Taleex ee gobolka Sool.
Oktoobar 24, 2011 12:00 b 0
Taleex, Oct, 23 – Degmada Taleex ee gobolka Sool ayaa xilligaan waxaa ku sugan wafti Issimo iyo cuqaal ah oo uu hogaaminayo Garaad Saleebaan Garaad Maxamed oo ka ka qayb gali doono shirka Khaatumo 2 ee ka furmi doona Taleex.
Shirka Khaatumo 2 ayaa ah mid looga arrinsanayo aayaha beesha Dhulbahante waxaana Garaadka oo maantay waraysi siiyay Radio Daljir uu sheegay in uusan siyaasad ku leh lahayn, isla markaana beeshu uga arrinsanayso danaheeda gaarka ah.
Garaad Saleebaan ayaa mar aan wax ka waydiinay cidda sugaysa ammniga degmada Taleex inta uu halkaasi ka socda shirka khaatumo 2 ayuu sheegay taas inay u utaalo dadka deegaanka, isla markaana aysan goobta shirka imaan karin maamulada Puntland iyo Somaliland.
Garaadka ayaa dhinaca kale mar uu ka hadlayay suurto-galnimada khilaaf soo dhex gala shirka waxaa uu sheegay in arrintaasi goor hore laga tabaabushaystay.
Mar aan waxka waydiinay Cali Sabaray oo ah guddoomiye ku xigeenka SSC oo si wayn u qaadacay shirkaasi ayaa Garaad Saleebaan waxaa uu si caro leh u tilmaamay inaan shirkaasi looga baahnayan SSC iyo cid mucaarad ahba, iska markaana shirku uu sida ugu dhaqsaha badan u qabsoomi doono.
M/weyne Shariif, oo ka horyimid galintaan ciidanka Kenya ee gudaha Soomaaliya.
Diyaargarawga shirka Khaatumo 2 oo si wayn uga socda degmada Taleex ee gobolka Sool.